Alfred, Nkosi Tennyson Imibongo
Umlobi waseNgesi oqaqambileyo wagxila kakhulu ekufeni, ukulahleka kunye nemvelo
Umlindi we- Great Britain kunye ne-Ireland, uStenyson wakha isakhono sakhe njengesibongozi kwiKholeji yeZiqu zintathu, xa wayelithandana ngu-Arthur Hallam kunye namalungu abapostile. Xa umhlobo wakhe uHallam washona ngokuzumayo eneminyaka engama-24 ubudala, uShuminyson wabhala enye yeengoma zakhe ezinde kakhulu kunye ezinokubethisa "KwiMemoriyam." Le nkondlo yaba yintandokazi kaKumkanikazi kaVictoria .
Nazi ezinye zeenkondlo ezaziwa kakhulu zikaTynyson, kunye neengcaphuno ezivela nganye.
Umrhumo weBhanyagrizi yokuKhanya
Mhlawumbi inkondlo eyaziwayo kakhulu yakwaTellnyson, "I-Charge of Brigade yoKhanya" iqulethe umgca othengiswayo "Ukukhawuleza, ukuthukuthela ngokufa kokukhanya." Ixelela ibali lembali leMfazwe yaseBalaclava ngexesha leMfazwe yaseCrimea, apho iBritish Light Brigade yabandezeleka kakhulu.Imbongo iqala:
Ihafu yesivumelwano, isiqingatha seligi,
Konke kwintlambo yokufa
Bakha amakhulu amathandathu.
Ebhalwa njengendlela yokuzimela ngeentlobo zomhlobo wakhe omkhulu uAarthur Hallam, le nkondlo ehamba phambili ibe yintsika yeenkonzo zesikhumbuzo. Umgca odumileyo "Ubume, obomvu ngezinyo kunye nokuphosa," kwenza ukuba kubonakale okokuqala kule mbongo, eqala:
Unyana onamandla kaThixo, uthando olungapheliyo,
Ngubani thina, abangaboni ubuso bakho,
Ngokholo, nokholo kuphela,
Ukholelwa apho asikwazi ukubonakalisa khona
Imisebenzi eminingi ye-Tennyson igxile ekufeni; kule nkondlo, ucinga indlela umntu efa ngayo, kodwa imvelo iya kuqhubeka emva kokuba sihambe.
Ihla, i-rivulet ebandayo, elwandle
Iqonga lakho lomrhumo lizisa:
Andiyi kuphinda ndihambe ngamanyathelo am
Ukuphuka, Ukuphuka, UkuPhula
Le yinye inkondlo i-Tennyson apho umbalisi unzima ukubonisa intlungu yakhe ngomhlobo olahlekileyo. Amagagasi aphuka ngokukhawuleza elunxwemeni, ekhumbuza umlandisi ixesha elo liqhubeka.
Ukuphuka, ukuphuka, ukuphuka,
Ngamatye akho amnyama amnyama, O Sea!
Kwaye ndifuna ukuba ulwimi lwam lukwazi ukuthetha
Iingcamango ezivela kum.
Le nkondlo ye-1889 isebenzisa ukufaniswa kolwandle kunye nesihlabathi ukumela ukufa. Kuthiwa ukuba uSinnyson ucele le nkondlo ifakwe njengengeniso yokugqibela kuyo nayiphi na ingqokelela yomsebenzi wakhe emva kokufa kwakhe.
I-Sunset neenkwenkwezi zakusihlwa,
Kwaye enye ifowuni ecacileyo kum!
Kwaye makungabikho ukugubha kwebhola,
Xa ndiphuma elwandle,
Ngoku Ulala Ngophulo
Le sonnetson sonnet isingqungquthela kangangokuthi abaninzi ababhali beengoma bazama ukuyibeka kumculo. Uqiqa, ngokusebenzisa ukusetyenziswa kwezendalo (iintyatyambo, iinkwenkwezi, izibilini) oko kuthetha ukuthini ukukhumbula umntu.
Ngoku ulala ebomvu, i-white;
Akayi kugubungela i-cypress kwinqanaba lebhola;
Awuyikuguqula igolide ekupheleni kwefonti yefonti:
I-fly fly-fly fly: vuka nawe.
Ngokusekelwe kwingqungquthela yaseArthurian , le nkondlo ixelela ibali leendoda ephantsi kwesiqalekiso esingaqondakaliyo. Nantsi inkcazo:
Ngalinye icala ngaphaya komlambo
Amasimi amakhulu amabhali kunye neer rye,
Ukugqoka i-wold kunye nokuhlangabeza isibhakabhaka;
Yaye i-thro 'intsimi endleleni eqhutywa ngayo
I-Splendor Falls kwiIndonga zeNqaba
Le ngqungquthela, inkondlo yomsindo ingcamango ecacileyo ngendlela umntu akhunjulwa ngayo.
Emva kokuva i-call echos e-valley, umlandisi ujonga "i-echoes" abantu abashiyayo.
Ubukhazikhazi buwela kwiindonga zeenqaba
Neengqungquthela zekhephu endala kwibali;
Ukukhanya okude kugubungela ngamachibi,
Kwaye i-cataract yasendle inyuke ezuko.
Ukuchazwa kuka-Tennyson wenkosi yamaGrike engummangaliso kufumanisa ukuba ufuna ukubuyela, nangemva kweminyaka emininzi esuka ekhaya. Le nkondlo iqulethe iqhosha elidumileyo nelikhankanyiweyo ngokubanzi "Ukuzama, ukufuna, ukufumana, nokungabikho."
Nasi ukuvula ku-"Ulysses" ka-Tennyson.
Inzuzo encinane yokuba ukumkani ongenalwazi,
Ngaloo ntsiba, phakathi kwezi ngxondorha,
Umdlalo kunye nomfazi oselekhulile, ndiyindoda kunye ne-dole
Imithetho engalinganiyo kwintlanga enqabileyo
20 Ukunika amandla Amaphuzu Ngokucinga Okulungileyo
IQela Elikhuthazayo nelikhuthaza
Iimpawu eziMnandi zeMasa eziPompoza imimoya yakho kwaye zibeke ziphakame
"Bavumele Batye Ikhekhe!" Isiqendu Esenza Indlovukazi uMary Marie Antoinette Intloko Yakhe
Ababhali Bathini NgeKrisimesi neSanta Claus
Ezi zi-15 zeenja eziMnandi zixelele ukuba kutheni iInja ziyakuthandeka kangaka
Iincwadi zeeNcwadi kunye namazwi
Iingcaphuno ezi-14 zeMastast Wedding Wedding
Iimvo zeMfazwe eziPhambili
Iingqapheli zokuSebenza ngobomi
Iingcaphuno zokugubha iSuku loMhlobo
Isilinganiso semigangatho ye-GRE kwiiNyuvesi eziPhezulu eziPhezulu
Uhlalutyo lukaWilliam Faulkner's 'Dry September'
Imfazwe Yomlomo: I-Bell X-1
Iiprojekthi zeBakala zeNzululwazi zeBakala le-7
Isikhokelo sokuFunda Isifundo sikaMtyholi noMat Walker
College of Saint Benedict Admissions
Yintoni iPasika (iPasta)?
Ungayisusa njani iStopper?
Iimifanekiso ezi-9 eziphambili zeMfazwe ngeziDakamizwa
Uqeqesho loQeqesho: Ngaba Unokuyithintela?
Ingaba wenzani Ukonwaba?
Iingcebiso eziPhambili zoPhando lweSizwe sokufudumala kunye noTshintsho lwemozulu
Yiyiphi i-New Paintball Abadlali abafuna ukuyazi
6 I-Great Humphrey Bogart Movies
Imfazwe Yehlabathi II: iM1 Garand Rifle
Icawa yamaRoma Katolika
Kutheni iifayili ezikhethekileyo kwii-quotas?
4 I-Skim Skills Unceda Unyuke Ngokukhawuleza
Izinto ezi-8 zokumazi ngeGymnast Dominique Dawes
Indlela Yokufumana Isihloko Sesivakalisi
Jonga ukuGrafing nePhepha eliCwangcisiweyo
10 Iingoma nge-Islam